सशस्त्र प्रहरीका ८ डीआईजीको सरुवा, हेर्नुहोस् को–कहाँ सरुवा भए ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सशस्त्र प्रहरीका ८ डीआईजीको सरुवा, हेर्नुहोस् को–कहाँ सरुवा भए ?
मंसिर १२ गते, २०७७ - १४:२१
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ८ जना सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को काज सरुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयले डीआईजीसँगै एकजना सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पनि सरुवा गरेको छ ।
बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै ८ डीआईजी र १ जना एसएसपीको सरुवा गरेको हो । डीआईजी राजु अर्यालको उपत्यका हेर्ने पशुपति बाहिनीको बाहिनीपतिमा सरुवा भएको छ ।
मंसिर १२ गते, २०७७ - १४:२१ मा प्रकाशित